HTC Na-ewebata HTC U Ultra na HTC U Na-egwu Njirimara Dị Iche Iche | Gam akporosis
Taa, anyị ji obere nchekasị na-eche ụbọchị a maka ihe kpatara ya doro anya ma ọ bụ maka mwepụta nke ọtụtụ ngwaọrụ HTC. HTC ahụ gosipụtara na maara ka esi eme ezigbo ọnụ ya na HTC 10 nke ọtụtụ ndị na-ahụghị, na maka ịbụ onye rụpụtara ekwentị izizi Google, Pixel.
HTC kwadoro ya nke mbụ ụzọ abụọ nke 2017 site na nkpughe nke ezinaulo ohuru nke ngwaọrụ a na akpo U. The HTC U Ultra na HTC U Play rutere n'otu oge yana na ịbịaru gị nso, ịmatakwu banyere onwe gị na ị bụ ezigbo ndị enyi. Nke a bụ tumadi n'ihi HTC Sense Companion, ngwa ga-amata gị ma jikwaa ama gị na ụzọ nke onwe gị.
1 A U usoro nke choro izute gi
2.1 Nkọwapụta HTC U Ultra
3 The HTC U Play
3.1 HTC U Play nkọwa
A U usoro nke choro izute gi
HTC Sense Companion bụ Taiwanese emeputa mebere aka onye chọrọ ịga n'ihu karịa ihe enwetara na Google Assistant, nke achọkwara na ekwentị ọhụrụ abụọ a, iji mepụta mmekọrịta chiri anya n'etiti igwe na mmadụ. Ọ bụ onye inyeaka a ga-agba mbọ ịkpa iche ya na ndị ọzọ site na itinye ụfọdụ ihe na-esiteghị na ihe anyị maara banyere Google n'onwe ya na onye enyemaka ya. Mana ọ bụ ihe anyị ga-ejirịrị, ebe ọ bụ na e nwere ụdị omenala dị iche iche, a ga-enwekwa ndị enyemaka dị iche iche.
The HTC U Ultra bụ nnukwu ekwentị nwere a ụdịdị dị mma n'okpuru iko ahụ Nke mara oke mma. Mgbe anyị ga-ekwu maka ha, anyị nwere ike ịgakwuru mgbawa Snapdragon 821, 4 GB nke Ram, 64 GB nke nchekwa dị n'ime, ihuenyo QHD nke 5,7-inch nke Gorilla Glass 5 kpuchitere na igwefoto dị elu nwere ọtụtụ pikselụ na imeghe ngwa ngwa. . Anyị ekwuola ụbọchị gara aga na M ga-arịgo otu ihe ahụ dị ka Pixel, ya mere na igwefoto kachasị elu nke atụmanya.
Otu n'ime ya peculiarities bụ 2-anụ ọhịa sekọndrị ngosi nke na echetara anyi otutu LG. Ihuenyo nke ọzọ na-anọdụ n'elu 5,7 ″ ihuenyo dị ka V10 na V10. Nwere ike ịgbakwunye ụzọ mkpirisi, gụọ ọkwa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nkọwapụta HTC U Ultra
Gam akporo 7.0 Nougat HTC Sense
5,7 nke anụ ọhịa ahụ Super LCD 5 Quad HD ihuenyo
2-anụ ọhịa 160 x 1040 sekọndrị ngosi
Snapdragon 821 quad / isi chip clocked na 2.15 GHz
64/128 GB n'ime nchekwa
MicroSD kaadị oghere
12 MP UltraPixel 2 igwefoto azụ, 1,55 micro, f / 1.8, OIS PDAF, Laser AF, ọkụ ụda abụọ, ndekọ vidiyo na 3D ọdịyo, ngwa ngwa ngagharị 720p na 120fps, ọdịyo dị elu
16 MP n'ihu igwefoto, BSI, UltraPixel mode, 1080p ndekọ vidiyo
Akụkụ: 162.41 x 79.79 x 7.99 mm
Arọ: gram 170
HTC U Play na-ejigide ngwaike magburu onwe ya nwanne ya nwoke nke okenye nọ n'èzí, mana ọ bụ n'ime ka ọ na-agbanye. U Play na-akpali ekele maka MediaTek processor, o nwere 3GB RAM na 32GB nke nchekwa dị n'ime. Ọ na-adaba na igwefoto 16 MP, batrị dị ala na mkpebi 1080p. Ya ihuenyo bụ 5,2 sentimita asatọ na mgbawa ahụ bụ Helio P10.
Lee, anyị nwere ike mafere ihuenyo nke abụọ Ọ nwere U Ultra, ọ bụ ezie na ọ nwere igwefoto n'ihu 16MP iji were selfies mara mma.
HTC U Play nkọwa
Gam akporo 6.0 Marshmallow HTC Sense
5,2-anụ ọhịa LCD ihuenyo, 1920 x 1080, ozodimgba iko
32 / 64GB n'ime nchekwa
16MP BSI f / 2.0 igwefoto azụ, OIS, PDAF, ọkụ ụda abụọ, vidiyo vidiyo 1080p na 30 fps
16MP BSI f / 2.0 UltraPixel mode n'ihu igwefoto, 1080p ndekọ vidiyo
2.500 mAh batrị
Akụkụ: 145.99 x 72.9 x 7.99 mm
Arọ: gram 145
HTC U Ultra adịworị na-ere ere na United States ma ọ ga-adaba na Europe na etiti February. Pricegwọ ya bụ 749 dollar. Anyị maara banyere U Play na a ga-ewepụta ya na Febụwarị, mana anyị amaghị ọnụ ahịa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC U Ultra na U Play bụ ndị ọchịchị nwere atụmatụ pụrụ iche yana nkọwa dị iche iche